प्रेसको गला निमोठ्ने कार्य बन्द गर
कैलाली जिल्लासँग सिमा जोडिएको गौरीफन्टा नाका दुई दिन बन्द हुने
मृगौला पिडित मल्ललाई प्रवासी नेपालीद्वारा आर्थिक सहयोग
भाेलीसम्म असिना पानी पर्ने सम्भावना
रामबिरको हली संसद !
बैशाख मसान्तसम्म शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने सिसिएमसिको निर्णय
२४ घण्टामा ८४३ कोरोना संक्रमित थपिए !
त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज खेलमा नेपालकाे शानदार जित
चर्चित पत्रकार ऋषी धमला पत्नी एलिजा गौतम चलचित्र अनुरागबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरेकी हुन् । धमला दम्पती आफैले निर्माण गरेको उक्त फिल्म चल्न सकेन तर एलिजको चर्चा भने भयो । एलिजालाई सानैदेखि पढाइमा भन्दा पनि नाच्न र गाउनमा बढी सोख थियो । पढाइमा भने उनले कहिल्यै त्यत्ति राम्रो अंक ल्याउन सकिनन् । घरमा उनले जितेका पुरस्कार र मेडलहरू अनगिन्ती छन्, तर त्यसमा पढाइको तर्फबाट पाएको भने एउटै छैनन् । सबै नाचगानको मात्र हुन् ।
भविष्यमा के बन्ने भन्ने पूर्णरूपमा आकार कोरिसकेकी थिइनन् उनले । तर, एउटा कुरा चाहिँ उनको दिमागमा बसेको थियो, ‘हिरोइन बन्छु’ । रंगीचंगी सपना देख्ने एलिजाको मनलाई घरको वातावरण र बाबुआमाको व्यवहारले काँच्चै खाइदिन्थ्यो ।
केटा साथी बनाउनसमेत डर लाग्ने परिवारमा ‘हिरोइन बन्छु’ भनेर भन्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा वञ्चरो हान्नुजस्तै लाग्थ्यो एलिजालाई । बुबाआमाले भनेको कुरा जे पनि मानिहाल्ने छवि भएको कारण पनि उनले आफ्ना रंगीन सपनाबारे बुबाआमालाई भन्ने आँट गर्न सकिनन् । तर सपना देख्न भने छोडिनन् उनले । एक चियापान कार्यक्रममा उनकी आमाले एलिजालाई पनि सँगै लिएर गइन् । एलिजालाई थाहा थिएन त्यो भेटले उनको जीवन नै परिवर्र्तन हुँदै छ भनेर । अक्सर जिन्दगीमा केही सामान्य घटनाले पनि जीवनलाई पूर्णरूपमा मोडिदिन्छन् । सोही कार्यक्रममा एलिजाको जीवनमा पनि त्यस्तै भयो ।
उनलाई पत्रकार ऋषि धमलासँग भेट गराइदिइन् । सायद एलिजाको विवाहको कुरा मिलाउन नै तयार गरिएको भेट थियो त्यो । त्यो भेटको एक हप्तामै उनको पत्रकार धमलासँग इन्गेजमेन्ट भयो । उनले एसएलसी दिनेबित्तिकै त्यो १८ वर्षको कलिलो उमेरमा उनले आफूभन्दा १७ वर्ष जेठा व्यक्तिसँग लगनगाँठो कसिन् । त्यसपछि उनी रंगिन दुनियाँमा कस्सिएर लागेकी छन् ।
फिल्ममा जम्न नसकेपनि म्युजिक भिडियामा भने निकै ब्यस्न बनेकी छन् । भने, सामाजिक संजालमा पनि निकै सक्रिय बनेकी छन् । पछिल्लो समय पनि उनी पोखरा पुगेर पहेलो ड्रेसमा सजिएर फोटोशुट गरेकी छन् । जहाँ उनी निकै खुलेकी छन् भने निकै सुन्दर पनि देखिएकी छन् । उनका ती तस्बिर भाइरल नै बनेका छन् । सन्तान जन्माएपछी पनि आफ्नो फ़िटनेसमा ध्यान राख्दै अभिनय र समाजसेवाको यात्रामा निरन्तर पाईला चाल्ने नारीको रुपमा उनको चर्चा हुने गर्दछ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमवार, फाल्गुन १७, २०७७ १०:१९:५४
बैशाख ५ गतेबाट उदाउँदैछ शुक्र, यी ९ राशीको भाग्य बलियो
भोली सोमबारे औंसीको रात, चुपचाप गर्नुहोस यो एउटा कार्य
झट्ट हेर्दा अनर्थ लाग्ने अर्थयुक्त तस्बिरहरू !
रातारात भाइरल बन्यो गोपी बहुको डान्स !
आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्री विरुद्ध लागेको भन्दै मुनु सिग्देललाइ स्पष्टीकरण सोधियो (पुर्ण पाठ)
२०७७ सालमा अत्यधिक चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण आर्टिकल !
फाँसीमा झुण्डिनुअघि रफीको गीत
बलिउड खलनायकका सुन्दर छोरीहरु, जो चर्चामा छैनन्
दयाहाङ राईका चार रोचक कुरा
टिका पहारी : सिनेमादेखि खेती-किसानीसम्म
यी सफल मेकर, जसले फिल्मको छायांकन सुरु गर्नै सकेनन्
जब जया बच्चनले फिल्म सेटमै रेखाको गाला चड्काइन्
कोरोनाको दोस्रो लहर : लकडाउन झेल्ने कि, सतर्क रहने ?
शिक्षा, ज्ञान र अध्ययनबारे आत्मकथन
मङ्लबार, चैत्र १०, २०७७
नेपाल पत्रकार महासङ्घको सभापतिमा मेरो उम्मेदवारी किन?
शनिबार, चैत्र ७, २०७७
मधेशको बेरोजगारी समस्या र समाधानका सजिलो उपाय
गणेश कुमार मण्डल
बिहिबार, चैत्र ५, २०७७
नेपाली ब्याट्सम्यान भुर्तेलकाे टी–२० अन्तर्राष्ट्रियको डेब्यु खेलमै अर्धशतक प्रहार
मन्त्रिपरिषद हेरफेर, गृहमन्त्रीमा नवराजको चर्चा
आमा सृष्टिकर्ता नै हुन् !
खुट्टा गुमाएर पनि माइल हिडेकी सुधा